6pcs ညှိနှိုင်းနိုင်သောခွေးလေ့ကျင့်ရေးခလုပ်များနှင့် Clicker Kit ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - တရုတ်စက်ရုံ - BEST-HOME
နေအိမ် > မူလစာမျက်နှာ > ခွေးလေ့ကျင့်ရေးကလစ် > Clickpit Kit နှင့်အတူ 6pcs ညှိနိုင်သောခွေးလေ့ကျင့်
ခွေးလေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းများ Lanyard နှင့်အတူဟောင်ရပ်တန့်ဖို့ခွေးလေ့ကျင့်ခွေးလက်ပတ်နာရီနှင့်အတူ Wrist ခွေးအသံတိတ်ခွေးခေါက်ထိန်းချုပ်ရေးဖှဲ့, Clicker နှင့်အတူခွေးလေ့ကျင့်ရေးတုံး, Adjustable အသံ Ultrasonic ခွေးလေ့ကျင့်ရေးကိရိယာနှင့် Lanyard ခွေးပြန်လည်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်အသံတိတ်လေ့ကျင့်ရေး
ပလတ်စတစ် + သတ္တု၊ နိုင်လွန်
အနက်ရောင်၊ ငွေရောင်၊ အပြာရောင်စသည်တို့ဖြစ်သည်
၆.၅ * ၄ စင်တီမီတာ / ကလစ်သမား ၉ * ၀.၈ စင်တီမီတာ / ၀ က်သွယ် ၁၆ စင်တီမီတာ / နွေကြိုးသိုင်းကြိုး ၁.၅ * ၄၅ စင်တီမီတာ / ချည်မျှင်
1အစုံ/Polybag,၁၀၀pcs / ပို့ဆောင်ပုံးများ
6အပိုင်းအစများခွေးလေ့ကျင့်ရေးမှုတ်စက်နှင့် Clicker Kit ပါ ၀ င်သည့်အပိုင်း ၄ ပိုင်းပါ ၀ င်သောခွေး Ultrasonic Whistle နှင့်ချည်နှောင်သောခွေးနှင့်4အပိုင်းအစများအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေ့ကျင့်ရေးအတွက်လက်ကောက်ဝတ်ဖြင့်သုတ်ပါ။
♥ ပစ္စည်း Our dog training kit is made of heavy duty metal and hard plastic, and designed with compact size, excellent texture, 100% safety, strong and durable. Also, our dog whistle and clicker come with premium quality lanyard and wrist strap, prevent loss, and convenient carrying
applying အသုံးချရန်အတွက်ဘေးကင်းစွာ - ခွေးပုပ်သံသည်သင်၏ခွေး၏နာခံမှုကိုသင်ကြားခြင်းနှင့်ထိုင်ခြင်း၊ လာခြင်း၊ ဟောင်ခြင်း၊ ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ပိုမိုသောအခြေခံစွမ်းရည်များကိုသင်ယူရန်သင့်လျော်သောသင်၏ခွေး၏ကြားနာမှုကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်။ ခွေးပီပီသည်သင်၏ခွေးများကိုလေ့ကျင့်ရန်အတွက်အသုံးဝင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်
just ညှိနှိုင်းရမည့်ကြိမ်နှုန်း - ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခွေးပီပီသည် 5.4KHz နှင့် 12.8KHz အကြားရန်ပုံငွေလှိုင်းနှုန်းများစွာကိုတိကျစွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ကွဲပြားခြားနားသော ultrasonic ကြိမ်နှုန်းကိုချိန်ညှိခြင်းဖြင့်သင်၏ခွေးကိုအကန့်အသတ်မရှိပညတ်ချက်များသင်အလွယ်တကူသင်ပေးနိုင်သည်။ သင်၏ whistle ည့်လမ်းညွှန်ကိုတသမတ်တည်းထိန်းထားပါ။ အပြုသဘောဖြင့်တုံ့ပြန်ပါကသင်၏ခွေးအားဆုချသင့်သည်
♥ Simple usages: Loosen the sonic adjustment screw, while blowing the air in from the air inlet, turn the adjustment lever to adjust to the optimum pitch. After the adjustment lever is turned, tighten the sonic adjustment screw. Notice your dog's reaction to each အစုံting until your dog exhibits the strongest reaction
•လေ့ကျင့်မှုလိုအပ်သည်။ သင်လေ့ကျင့်ပေးသောပီပီသည်သင့်ခွေးအားသင်၏ညွှန်ကြားချက်များကိုချက်ချင်းနားလည်စေမည်မဟုတ်ကြောင်းသင်သတိပြုသင့်သည်။ သင်၏ခွေးကိုနားလည်ရန်နှင့်သင်၏ညွှန်ကြားချက်များကိုတုန့်ပြန်ရန်သင့်ခွေးအားအချိန်အတန်ကြာလေ့ကျင့်ရန်လိုအပ်သည်။ သင့်ခွေးများကို ၃ လမှ ၇ လအထိလေ့ကျင့်သင့်သည်
hot Tags:: တရုတ်၊ စက်ရုံ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကား၊ စျေးပေါ၊ နောက်ဆုံး၊ အနိမ့်သောစျေးနှုန်း၊ ဈေးနှုန်း၊ ဈေးနှုန်း၊